जब चीनले पश्चिमलाई भेट्यो - पोलिटिकोपेथी
जब चीन पश्चिम भेट भयो
एशिया चीन उत्तर अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन पश्चिम र विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको ठूलो द्वन्द्वमा आउँदा यस सम्बन्धको लामो चापलाई विचार गर्ने समय उत्तम छ। पश्चिममा, चिनियाँ इतिहासलाई सामान्यतया पहिलो अफिम युद्धको साथ शुरू भएको हो भन्ने धारणा दिइन्छ, यो धारणा दिन्छ कि यूरोपीय शक्तिहरूले सँधै माथिल्लो हात राख्दछन्। तर १ and औं शताब्दीको सुरुतिर दक्षिण चीनमा पुर्तगालीहरूको आगमन - पूर्व र पश्चिम बीचको पहिलो प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट चिनियाँहरू प्रभुत्वमा थिए।
१ 1517१ In मा, उनीहरू गुआzhou्झाउको प्रख्यात ट्रेडिंग हेवन नजिकै देखा परेका थिए, काठका बिदा जहाजहरूमा अनौंठो र अनियन्त्रित बर्बरहरू। उनीहरूले बोलेको भाषा एउटा अस्पष्ट रहस्य थियो, उनीहरूको आठवटा जहाजहरू Zheng He's Treasure Junks को मानदण्ड द्वारा दण्डित, र तिनीहरूको अन्तिम उत्पत्ति अलि अलि अप्ठ्यारो भयो। तर अन्य सबै समुद्री रुफियनहरू जस्तै तिनीहरू पनि धनी रेशमहरू र चीनका अन्य चमत्कारहरूका लागि व्यापार गर्न चाहन्थे। चिनियाँहरु उनीहरुलाई बोलाउन आएका थिए folangji, एक सामान्य शब्द यूरोपियानों सन्दर्भ गर्न समय मा प्रयोग गरियो। अझ विशेष गरी, ती पोर्तुगालीहरू थिए, र उनीहरू पहिलो यूरोपियन थिए जसले चीनसम्म सबै मार्गहरूमा यात्रा गरे।
यो पोस्ट शुमानको अंश थियो आगामी पुस्तक.
पोर्चुगल राज्यका साहसी नाविकहरू १ 1498 XNUMX in मा हिन्द महासागरमा छिरे जब वास्को डि गामाले अफ्रिकाको केपलाई घेरा हाले र भारतको दक्षिणपश्चिमी तटमा आफ्नो मार्ग पत्ता लगाए। यो एक पृथ्वी-रटलिंग पल थियो। त्यस बेलादेखि पश्चिमी युरोप मुख्यतया चीन, भारत र इस्लामिक विश्वको बीचमा आदानप्रदान गरेर संचालित वैश्विक अर्थतन्त्रको छेउमा थियो। पोर्चुगल त्यो किनारको किनारमा थियो। सबै परिवर्तन हुनेछ। पोर्तुगालीको एसियामा आगमनले "पश्चिम" - युरोप र पछि अमेरिकाको आउँदो आरोहणको वर्णन गर्‍यो।
पोर्तुगाली आक्रमणले विश्वको चिनियाँ इतिहासमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मोड पा .्यो। वास्तवमा यसले चीनको ईतिहासको पाठ्यक्रमलाई पहिलेको भन्दा बढी गम्भीर रूपमा बदल्न सक्छ, २२१ मा मूल किन एकीकरणको सम्भावित अपवाद सहित। ई.पू. समयको ती दुलहा पलहरू मध्ये त्यो एक थियो जब दुईवटा ऐतिहासिक कथाहरू जुन एकदमै छुट्टिदै आएका थिए अचानक एका अर्कोमा क्रुश भएको थियो। तिनीहरू द्रुत रूपमा अल्झिए, र फेरि कहिल्यै अनावश्यक हुने छैन।
[पढ्नुहोस्: कसरी चीन फिर्ता दुनिया को जीत को लागी योजना गरीरहेको छ]
चिनियाँहरूले १ 1517१ in मा यसको कुनै पनि कुरा जान्दैनथे। पोर्चुगिजहरू अन्य व्यापारिक भोका बर्बरहरूजस्तो देखिन्थ्यो जसले धेरै शताब्दीहरूमा चीन, डु boat्गा, घोडा र ऊँटमा यात्रा गरेका थिए — चाहे सोग्डियन, भारतीय, फारसी, वा जापानी।
पुर्तुगालीहरूले युरोपबाट चिनियाँले सामना गर्नुपरेको व्यापार र कूटनीतिको बिभिन्न बिचार धारण गरेका थिए। यति मात्र होइन, पोर्तुगालीहरूले काठको कारभालमा बोकेका थिए जुन चिनियाँहरूले पहिले भेटेका थिए। चिनियाँ सांस्कृतिक अभ्यास, वा चिनियाँ विश्व व्यवस्थाको नियम र मापदण्डमा भाग लिने सामान्य बर्बरीवासीहरू जस्तो नभई पुर्तगाली र युरोपियनहरूले एसियामा पछ्याएका आफैंले आफ्नो सभ्यता राम्रो मान्थे। मानिसहरू बीच झगडा भइरहेको थियो जो प्रत्येकले आफ्नो सभ्यता सबै भन्दा राम्रो मान्दछन्। चिनियाँहरू केवल असुरक्षित थिए र बाहिरी व्यक्तिहरूबाट यस प्रकारको चुनौतीको लागि तयार थिए।
विदेशी बर्बरहरूले चीनलाई सैन्य रूपमा पराजित गर्न सक्दछन् र साम्राज्यलाई पनि पन्छाउन सक्थे, तर चिनियाँ आँखामा मंगोल, सियोनग्नु र अन्य विदेशी कीराले कहिले पनि चिनियाँ आत्मनिर्णयको अपमान गरेनन। धेरै मानिने विजेताहरु धेरै जित्ने जस्तो देखिन्थ्यो। युरोपियनहरू आफ्नै सभ्यताको मूल्यमा पूर्ण रूपले विश्वस्त थिए र उनीहरूले चिनियाँ विश्व व्यवस्थामा पूर्ण रूपमा नयाँ खतरा देखाए।
एसियामा पुर्तगाली उपस्थितिको शुरुका दिनहरूमा के हुनेवाला छ भनेर पहिले नै संकेतहरू थिए। जब दा गामा र उनका उत्तराधिकारीहरू हिन्द महासागरमा यात्रा गरे, तिनीहरू विश्वव्यापी रूपमा स्थापित, बहुसांस्कृतिक ट्रेडिंग नेटवर्क र प्रचलनहरूको संसारमा प्रवेश गरे। विगतमा, नयाँ प्रवेश गर्नेहरू केवल मैदानमा सामेल भए - चिनियाँहरू लगायत। झेng्ग, उदाहरणका लागि, उनले चिनियाँ शक्तिले विश्वलाई प्रभावित गर्ने चाहना गरे तर यस क्षेत्र र यसको व्यापारमाथि प्रभुत्व जमाउन खोजेनन्। पुर्तगालीहरूले जहाँ एशियामा अवतरण गरे त्यहाँ चिनियाँहरू भइसकेका थिए। दक्षिणी भारतमा दा गामालाई हल्का छाला, दाह्री भएका मानिसहरुका कथाहरू भनिएको थियो जसले पहिले तटको पुस्ताको भ्रमण गरिसकेका थिए Z झेंग हेका फ्ल्याटहरूको सन्दर्भमा, जसले झण्डै एक शताब्दी अगाडि समुद्रमा आफ्नो लंगर डुबायो।
यद्यपि पोर्तुगालीहरू युरोपको मर्चेन्टिस्ट क्रूरतामा पैदा भए, जहाँ व्यापार, युद्ध र शक्तिबीच छुट्टिए पनि बिरोध हुन सके। उनीहरूले पूर्वी र पश्चिम बीचको व्यापारमा भाग नलिएको तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। र तिनीहरूले नयाँ, आक्रामक रणनीति र उच्च हतियारहरू प्रयोग गरे उनीहरूको इच्छालाई थोप्नको लागि। जब उनीहरू दक्षिणपूर्व एशियाको मलाक्कामा फस्टाउँदै थिए तर पोर्चुगिजले जित्ने प्रयास गरे जुन उनीहरूले १ 1511११ मा गरे। दक्षिण र पूर्वी एशियाका समुद्री राज्यहरूले पुर्तगाली जस्तो पहिले कहिल्यै देखेका थिएनन्। पागल मि M्गले बोकेका चिनियाँहरू आफूले कोसँग व्यवहार गरिरहेका थिए वा के गर्दै छन् भन्ने बारेमा त्यति सजग थिएनन्।
[पढ्नुहोस्: ह Hongक Kongको अन्त्य]
१ 16 औं शताब्दीको शुरुमा, पोर्तुगालीहरू मह मि to साम्राज्यको लागि हात्तीको बोट जस्तो ठूलो खतरा थिए। र सुरुमा पोर्तुगालीहरूले चिनियाँ व्यापार प्रणालीलाई चुनौती दिन थोरै गरे। उनीहरूले चीनसँग सम्बन्धको खोजी धेरै मानक समुद्री समुद्री बर्बियनहरू जस्ता गरे जुन शताब्दीयौंदेखि गुआzhou्झाउ पुगिरहेका थिए। १ 1517१XNUMX मिसनले पोर्चुगाली राजाले मि pharmacist अदालतमा आधिकारिक दूतको रूपमा नियुक्त गरेको भूतपूर्व फार्मासिस्ट टोमा पाइर्सलाई बोकेका थिए। पोर्तुगालीहरूले मिing्ग सोभन अफ हेभिनको भित्ते राज्य बन्ने र आकर्षक चिनियाँ सामानहरूमा पहुँच पुर्‍याउन अन्य बार्बेरियनहरू जस्तै श्रद्धांजलि र व्यापारमा भाग लिने उद्देश्य राखेका थिए। अर्को शब्दमा, तिनीहरूको लक्ष्य चिनियाँ संसारमा सामेल हुनु थियो, यसलाई ध्वस्त पार्नु होइन।
चीजहरू एक रक स्टार्टको लागि बन्द भयो। फर्नो पेरेस डि एन्ड्राडको नेतृत्वमा रहेको फ्लोटिल्लालाई स्थानीय नौसेना कमाण्डरले गुवाzhou्जु पहुँच गर्न अस्वीकार गरे। शicious्कास्पद मिingले विदेश व्यापार प्रतिबन्ध लगाउँदै थिए; पोर्चुगल औपचारिक सहायक नदी थिएन, र यसैले राजवंशका अधिकारीहरूले यसलाई व्यापार गर्न पाउने अधिकारको रूपमा मान्यता दिएनन्। एक महिनाको प्रतिक्षा पछि, एन्ड्रेडले जे भए पनि जहाजमा यात्रा गर्ने धम्की दिए र घबराएका स्थानीय कमाण्डर रिlenल्ट भए। एक पटक गुआन्झाउमा, अन्ड्रेडले अनजानमै शहरको उन्मादपूर्ण कामदारहरूलाई चिनी प्रोटोकलमा गम्भीर नक्कली पारेर सलाममा आफ्नो तोपबाट गोली हाने। पुर्तगालीले लामो समयदेखि वफादार चिनियाँ व्लासल मलाकाका राजालाई जम्मा गर्ने बारेमा घमण्ड गरेपछि मिing अधिकारीहरू खुशी भएनन्। भाग्यवस, ईमानदार र कूटनीतिक एन्ड्राडेले मामिलालाई सुस्त बनाए, र चाँडै ती दुबै पक्षहरूले खुशीयालीको आदानप्रदान गरिरहेका थिए।
बाँया: पोर्तुगाली अन्वेषक अफोन्सो डि अल्बुकर्क, जसले १rade१1517 मा अण्ड्राडे र पाइर्सलाई मि China चीनमा पठाए। दायाँ: मिing सम्राट झेंगदे। (गेमेटी मार्फत लीमेज / कर्बिस; अलामी)
पोर्तुगालीहरू गुआन्झाउमा फेला परेका चीजहरूले चकित भए। यसको अविश्वसनीय धनले घरलाई पछाडि केहि पनि छोडिदियो। एउटा समकालीन पोर्तुगाली विवरणले शहरमा फर्केका गभर्नरलाई स्वागत गर्न भव्य समारोहमा उनीहरूको आश्चर्यकर्महरू रेकर्ड गर्दछ। यसमा यस्तो लेखिएको छ, “राम्प्टहरू रेशमको ब्यानरमा ढाकिएका थिए, जबकि टावरहरूमा फ्लैगस्ट्याफहरू थिए जसबाट रेशमको झण्डा पनि झुण्डिएको थियो, यिनीहरू विशाल थिए कि तिनीहरू पालको रूपमा प्रयोग गर्न सक्थे। "त्यस देशको सम्पत्ति यस्तै हो, यसको रेशमको विशाल आपूर्ति हो कि उनीहरूले यी झण्डामा सुनको पत्ती र रेशम खेर फाल्छन् जहाँ हामी सस्तो र colors्ग र मोटा सुती कपडा प्रयोग गर्दछौं।"
एन्ड्राडे एक शुभ मुहूर्तमा आइपुगेका थिए, जब सम्राट झेंगदे उनका अधिकांश मिing पूर्ववर्तीहरू भन्दा विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदानको कम शत्रु थिए। गुवाzhou्जुका चिनियाँ अधिकारीहरू सम्राटलाई भेट्न अनुमति पर्खाइ गर्न पिरस र उनको पुनःस्थापनालाई स्वीकार्न सहमत भए। जब १rade१1518 मा अन्द्र्रेड बिदाइ भए, उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई कडा आधारमा छाडे। एक जना पुर्तगाली लेखकले भने, “एन्ड्राडेले [गुवाang्जु] शहर र चीनको मुलुकमा यति सहजताका साथ व्यवस्था गरेका थिए कि उनी गए पछि पोर्तुगाली र चिनियाँ बीचको व्यापार शान्ति र सुरक्षामा सम्पन्न भयो र पुरुषहरूले ठूलो नाफा कमाए,” एक पोर्तुगाली लेखकले भने। लामो समयको लागि होईन।
पोर्तुगाली बेलीकोसिटीले अण्ड्रेडको राम्रो कामलाई छिटो खेर गयो। उनका भाइ सिमियो डे एन्ड्राड १ 1519१ in मा मालाक्काबाट चीनको तटमा आइपुगे तर यो एन्ड्राड एक फरक हिसाबले "हडबडे, अहंकारी र व्यर्थ" थिए। उनले चाँडै नै चिनियाँ टापुमा किल्ला बनाएर आफ्ना पाहुनाहरूलाई अलग्ग पारे र अरू विदेशीहरूलाई उनको अगाडि व्यापार गर्न निषेध गरे, र मिing अफिसरलाई दुर्व्यवहार गरे जसले परिस्थितिमाथि नियन्त्रण राख्न खोजेका थिए। अहिलेसम्मको सबैभन्दा खराब समस्या सिमियोले चिनियाँ बच्चाहरू किनेको थियो, हुनसक्छ नोकरको रूपमा। चिनियाँहरूले सोच्थे कि पोर्तुगालीहरूले बच्चाहरूलाई रातको खानामा पोलेको छ। यो दाबीले मिing राजवंशको आधिकारिक इतिहासमा प्रवेश गरेको दाबी गरे: पोर्तुगालीहरू “खाना पकाउनसम्म बच्चाहरूलाई पक्रिए।” एक पोर्तुगाली लेखकले यस्तो दुखेसो पोखे कि “केही दिनमै उनीहरूको खराब व्यवहारले उनीहरूलाई साथीभाइ र सहयोगी होइन तर खराब डाकू र शत्रुहरूको ख्याति कमायो।”
बेइजि toमा पठाइएको यो क्रूर व्यवहारको रिपोर्टले पहिले नै समस्याग्रस्त पाइरस अभियानलाई नराम्रो बनायो। पोर्तुगाली राजदूतले राजधानीको लागि आफ्नो यात्रा गरेका थिए, जहाँ उनी सम्राटसँग श्रोताको प्रतीक्षा गर्दै थिए। मौसम केही शत्रुतापूर्ण थियो। चिनियाँ अधिकारीहरूले मलाकाका राजालाई दुर्व्यवहार गरेकोमा सम्राट्ले अदालतलाई स्मारकहरू पठाए र सम्राटले पाइर्स दूतावास अस्वीकार गर्ने वकालत गरे। मुद्दालाई झनै नराम्रो बनाउँदै पाइर्सले अदालतलाई पुर्तुगाली सार्वभौम राजा मनुएल प्रथमको चिठी पठाए जुन चिनियाँ महान् व्यक्ति भेटिए। यो "उनले मूर्तिपूजक राजकुमारहरूप्रति सामान्य तरिकाले अपनाएको तरिकामा" रचना गरिएको हो, एउटा पोर्तुगाली विवरण अनुसार।
१ 1521१२ मा सम्राटको मृत्युले यस अभियानको अन्त्यको संकेत दियो। भोलिपल्ट पाइर्स बेइजि ofबाट बाहिर निस्के र गुआन्झाउ फिर्ता पठाईयो। त्यहाँ उनलाई सम्राटको राजा मानुएललाई लेख्न बाध्य पारियो कि पोर्तुगालीहरूले मलाक्काको सुल्तानलाई उसको दाहिने सिंहासनमा पुनःस्थापित गर्नुपर्दछ र पाइसलाई आज्ञा पालनको लागि बंधक बनाइयो। उनले कहिल्यै चीन छाड्ने छैनन्। कहिलेकाँही कठोर परिस्थितिमा राखिएको थियो र १tered२1524 मा उनको मृत्यु भयो।
[पढ्नुहोस्: चीनले विश्वलाई कसरी हेर्छ]
सम्राटको मृत्युको लगत्तै पोर्तुगाली भाषाको नयाँ फ्लोटिला व्यापार गर्न आउँदा अवस्था झनै नराम्रो भयो। जब उनको निधनको खबर गुआzhou्झाउमा आयो, स्थानीय अधिकारीहरूले पोर्तुगाली र अन्य सबै विदेशी व्यापारीहरुलाई प्रस्थान गर्न आदेश दिए। तर ओर्ने पुर्तगालीले पहिले नै व्यवसाय गरिरहेका थिए। चिनियाँहरूले एउटा ठूलो जहाजमा जम्मा गरे र संख्या बढेको पोर्तगालीमा आक्रमण गरे जसले एउटा जहाज डुबायो र कैदी बनायो। दुई अन्य अवसरमा, पोर्तुगाली व्यापार जहाज र चिनियाँ युद्ध जंक हावा मा आए। त्यसोभए, १1522२२ मा, अर्को पोर्तुगाली स्क्वाड्रनले मि Chineseसँग शान्तिमय सम्बन्ध बनाउन आयोगको साथ चिनियाँ तटमा देखा पर्‍यो। तिनीहरू आँखा चिम्लेर चिनियाँ आक्रमणमा उनीहरूको दुई तीन जहाज डुबायो। दुर्भाग्यपूर्ण पोर्तगाली यी संलग्नताहरु मा कब्जा एक भयानक अन्त सहन। एक जना जीवित प्रत्यक्षदर्शीले भने, “प्रत्येक व्यक्तिको टाउको, खुट्टा र हतियारहरू गुमाउनुपर्‍यो, प्रत्येकलाई २ pieces जनालाई काटियो। "तिनीहरूको जननांग तिनीहरूको मुखमा भरिएका थिए, र प्रत्येक शरीरको सोंचा पेटको वरिपरि दुई भागहरुमा लपेटिएको थियो।"
पोर्तुगालीहरू चीनको व्यापारको छायातिर धकेले। आधिकारिक आदानप्रदानबाट प्रतिबन्धित, तिनीहरूले अर्को years० बर्ष अवैध, तर अझै जीवन्त, व्यापार मा व्यस्त बिताए जुन मिing नियन्त्रणबाट निस्के। यद्यपि, अन्ततः तिनीहरूलाई चिसोबाट ल्याइयो। पोर्चुगलसँगको व्यापार बेवास्ता गर्न धेरै आकर्षक साबित भयो, र स्थानीय मिing अफिसरहरूले यी युद्धकारी नयाँ आगमनहरूको उपयोगिता देख्न थाले। सन्‌ १ 30 मा दक्षिणी चीनमा मि mand म्यान्डारिनहरूले पोर्चुगालीहरूलाई गुआzhou्झहौबाट केही दूरी पर रहेको मकाउको प्रायद्वीपमा रहेको व्यापार बस्तीमा बसोबास गर्न अनुमति दिए। Years वर्षभित्र लगभग 1557 ०० पुर्तगालीहरूको समुदायले त्यहाँ स collected्कलन गरेर दुईवटा चर्च र केही सामान्य घरहरू बनाएको थियो। व्यापार बढी उदार हुँदै जाँदा, उपनिवेश अझ बढ्यो। चिनियाँहरूका लागि, मकाउ एक अचम्मको विदेशी स्थान भयो, विचित्र वास्तुकला, अपरिचित व्यक्ति र अपरिचित धार्मिक जुलूसहरूको साथ। केही स्थानीय चिनियाँहरूले मकाउमा बस्तीलाई खराब शगुनको रूपमा देखे; अरूले गुनासो गरे कि यो अब चीनको हिस्सा थिएन। एक युरोपेलीले १ 900० को दशकमा भनेका थिए कि "चिनियाँहरु विदेशीहरुप्रतिको डर र बिरामी पर्नु स्वाभाविक प्रवृत्ति थियो।" तिनीहरूले पोर्तुगालीलाई “विदेशी शैतानहरू” भने।
मकाउको दृश्य चित्रण गर्ने अनुपम दृष्टान्त। (बेट्टम्यान / गेट्टी)
माकाउ भन्दा अनौठो, यद्यपि, त्यो उपनिवेश अस्तित्वमा थियो। बन्दोबस्त स्पष्ट रूपमा व्यापार र कूटनीति को नियमहरु भन्दा बाहिर थियो जसले चिनियाँ संसारलाई चलायो। पुर्तगालले मि countries अदालतसँग औपचारिक सम्बन्ध बनाउन सकेन अन्य साम्राज्यका देशहरूमा जस्तै। मकाउ बच्यो किनकि यसले स्थानीय अधिकारी र व्यापारीहरूलाई नाफा दियो जसले केन्द्र सरकारको अवज्ञा गर्ने अधिकार र स्नायु पायो। एक आधिकारिक मि history ईतिहासले त्यस्तै एउटा स्वतन्त्र विचारधारी मन्दारिनको आलोचना गर्‍यो, "निषेधको नाटक तर गोप्य रूपमा दुष्कर्म बढ्न दिएर।"
[पढ्नुहोस्: विश्वव्यापी प्रभावमा चीनको सम्झौताको भुक्तानी भइरहेको छ]
तिनीहरूको स्थापनादेखि नै, पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्ध बिभिन्न नियमहरूको आधारमा चलेको थियो। चिनियाँहरूले यद्यपि माथिल्लो हात समातिरहे। पोर्तुगालीसँग केही निफ्टी सैन्य टेक्नोलोजी थियो, ती सबैमा अत्यन्तै प्रभावकारी तोप थियो जुन चिनियाँहरूले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका थिए। तर ती थोरै जहाजहरू चिनियाँ तटमा तैनाथ गर्न सक्षम थिए सम्भवतः मिing सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन सक्दैनन्। (वास्तवमा, पोर्तुगालका विशेषज्ञ समुद्री जहाजहरूले चिनियाँबाट जहाज निर्माणको बारेमा एक वा दुई कुरा सिकेका थिए, जसमा बिटुमेनको लेपसहित काठको खालको वाटरप्रूफिंग अभ्यास पनि समावेश थियो।) र यी मात्र अवस्थामा folangji १ line1573 मा मकाउ प्रायद्वीपको साँघुरो बिन्दुमा पर्खाल र एउटा गेट निर्माण गरियो र पोर्तुगालीहरूले यसलाई पार गर्न मनाही गर्यो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने सानो पर्खाल पर्खालको मकाउ छेउमा बन्द छ, जसले पोर्तुगालीहरूलाई खानाको लागि चिनियाँमा निर्भर छोडिदियो। मिingले केवल फाटक लक गर्न सक्दछ र यी बर्बरहरूलाई सबमिशनमा भोक लगाउँदछ। मकाउ चीनको खुशीमा मात्र अस्तित्वमा थियो।
टाढा-टाढाको "पश्चिमी महासागर" बाट आएका अन्य ग्यानाटहरू यथासंभव सहज रूपमा स्वेट गरिएको थियो। मिगेल लोपेज दे लेगाजपीको नेतृत्वमा रहेको स्पेनी स्पेसिली नयाँ विश्वमा स्पेनको साम्राज्यबाट प्रशान्त महासागर पार गरे र फिलिपिन्समा बनेको मनिलाको नियन्त्रणमा लिए। लगभग तुरुन्तै - १ 1573—1601 मा, चिनियाँ सामानहरूको पहिलो ढुवानी मनिलाबाट न्यू स्पेन (अब मेक्सिको) मा एकापुल्को पठाइएको थियो। स्पेनिशहरूले पोर्तुगालीहरूले जस्तै मिingसँग औपचारिक व्यापारिक सम्बन्ध बनाउन खोजे तर कतै भेटिएन। यद्यपि मनिला चीन व्यापारको प्रमुख केन्द्र बने, र चिनियाँ ज Chinese्गहरूले ठूलो मूल्यमा पोर्सिलेन र अन्य उत्पादनहरू ल्याए जुन मेक्सिकोमा स्पेनी ग्यालेन्स मार्फत पठाइन्छ। त्यसपछि डच आए। पहिलो डच जहाज १ XNUMX०१ मा मकाउको तटमा देखा पर्‍यो।
पोर्तुगालीहरूले प्रतिस्पर्धाको पीछा गरे, तर चाँडै नै फिर्ता भयो - एकदम चाँडै, यदि तपाईंले मिing अधिकारीहरूलाई सोध्नुभयो भने। हong्गमाओ, वा "रातो कपाल", जसलाई चिनियाँहरूले बोलाउँथे, भन्दा प्रतिष्ठान कमायो folangji। १ 1622२२ मा, डचहरूले फुजियान तट नजिकका टापुहरू कब्जा गरे, किल्ला बनाउन शुरू गरे, र मिing अधिकारीहरूलाई अल्टिमेटम पठाए: यदि उनीहरूले चिनियाँ व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न अनुमति दिएनन् भने डचहरूले चिनियाँ जहाजहरू र तटीय शहरहरूमा आक्रमण गर्ने थिए। जब उनीहरूले सन्तोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेन, डचले झ्यामेन शहरको वरिपरि चिनियाँ जks्कहरू जलाइदिए। यो चिनियाँहरूका लागि धेरै थियो, जसले १ 1624२XNUMX को प्रारम्भमा नेभल स्क्वाड्रन भेला गरे र नेदरल्याण्डको स्थानमा आक्रमण गरे र अन्ततः उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न बाध्य तुल्याए।
चिनियाँ तटमा पैदल यात्रा गर्न असमर्थ, डचहरू यसको सट्टा ताइवान टापुमा बसोबास गरे, जहाँ तिनीहरूले कास्टेल जीलाण्डिया भन्ने ठाँउ किल्ला निर्माण गरे। चिनियाँ जks्कहरू यस डच चौकीमा व्यापारको लागि यात्रा गरे। यो डचले मनपराएको व्यापारिक सम्बन्ध थिएन, तर यो तिनीहरूसँग भएको थियो। यी नयाँ बार्बेरियनहरू उनीहरूको लगनशीलताको बाबजुद पनि चिनियाँ विश्वको सीमान्तमा धकेलिए।
यो पोष्ट मूलतः द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो एटलांटिक.
अघिल्लो पोस्ट मध्य मालीमा आतंककारी हमलाले दुई दर्जन भन्दा बढीको हत्या गर्‍यो
अर्को पोस्ट ट्रम्पले जर्ज फ्लोडको चरित्र रद्दी टर्की गर्दै अन्तर्वार्ता रिट्वीट गरे जस्तै उनले आफ्नै ट्विटर रेकर्ड तोड्यो
Authorities inacity in the Chinese region of Inner Mongolia issuedawarning on Sunday, one day after a